Isao ny fitahianao fa tsy olana. - Anony - Quote Pedia
Amin'ny fiainana, zava-dehibe ny toe-tsaina. Ny fomba fijerintsika sy ny ataontsika no mamaritra hoe iza isika. Ny toe-tsaintsika dia tokony ho toy izany satria manampy antsika sy ny hafa manodidina antsika handroso sy hiroborobo. Tokony hojerentsika eo alohan'ny fiainana miaraka amin'ny fanantenana sy fahatsarana.
Tokony hampiasa ny fahaizantsika amin'ny ambaratonga tsara indrindra isika mba hahafahana maniry sy mankasitraka ny fiainana sarobidy izay nomena antsika. Isika rehetra dia manana ny anjaratsika amin'ny tolona, ​​fa ny fanalahidy dia ny tsy hamelanay an'izany olana izany. Raha tokony ho amin'ny vanim-potoana toy izany, dia manampy be dia be izany raha ataontsika ny fitahiany.
Rehefa mamely antsika ny tsy fahombiazana na ny olana, dia tsy mahavita na inona na inona afa-tsy ny olana isika. Fa tena zava-dehibe tokoa, amin'ny toe-javatra toy izany indrindra, dia tokony handinika tsara ny zavatra rehetra sy ny olona notahian'Andriamanitra isika. Ireo dia manome anay fifaliana sy hery hiatrehana ny olantsika.
Izy io dia manome hery hiatrehana ny olantsika satria tsapantsika fa betsaka ny zavatra mendrika hiady. Misy fitahiana ao amin'ny fiainantsika tokony hankasitrahana. Manome fanantenana ho antsika izany, hiady amin'ny olantsika ary mandroso.
Tokony hianatra ny lesona avy amin'ny fahasahiranantsika isika nefa tsy tokony hifikitra amin'ny alahelo sy ny tahotra izay niaraka taminy taloha. Mazava ho azy fa mora kokoa noho ny vita izany. Fa afaka mizotra ianao raha manodidina ny tenanao amin'ny fahatsinjovana. Afaka mihetsika ianao raha mirotsaka amin'ny fanaovana izay tianao. Amin'izany rehetra izany, tadidio manetre tena sy mankasitraka noho izay anananao rehetra.
Teny sy tso-pahefana
Olana amin'ny olana
Olana amin'ny teny sy fomba fiteny
Ny olana dia manintona sary
Quotes on God bless
Ampiasao ho tsara fanahy ny feonao, ny sofinao amin'ny fangorahana, ny tànanao hanao asa soa, ny sainao ho amin'ny fahamarinana, ary ny fonao ho fitiavana. - Anonyme
Ampiasao ho tsara fanahy ny feonao, ny sofinao amin'ny fangorahana, ny tananao hanao asa soa, ny sainao ho amin'ny fahamarinana, ary…
Manatsara ny zava-drehetra ny vavaka. - Anonyme
Manatsara ny zava-drehetra ny vavaka. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Satria ny olona mitsiky foana mandritra ny fotoana rehetra dia tsy midika hoe tonga lafatra ny fiainany. Ny tsiky dia mariky ny fanantenana sy tanjaka. - Anonyme
Satria ny olona mitsiky foana mandritra ny fotoana rehetra dia tsy midika hoe tonga lafatra ny fiainany. Ny tsiky dia…
Mikatsaha fo tsara tarehy. Tsy voatery hoe endrika tsara tarehy izany. Ny olona tsara tarehy dia tsy tsara foana. Fa tsara foana ny olona tsara tarehy. - Anonyme
Mikatsaha fo tsara tarehy. Tsy voatery hoe endrika tsara tarehy izany. Ny olona tsara tarehy dia tsy tsara foana. Fa tsara…